Chii chaunofanira kuziva pamusoro pezvikwereti zvakabhadharwa?
Kana mumwe munhu akandibvunza kuti chinonyanya kukosha chekutsvaga injini yekugadzirisa chii, ndichapindura kuti hazvina mubvunzo backlinks. Hazvina mhosva kuti unozviwana sei. Chinhu chacho ndechokuti vanofanira kunge vari uye zvakanyanya, zviri nani. Usatenda kune ani anotaura kuti kuvaka chivako chafa. Mashoko aya asina kururama ari kuparadzirwa nevashambadziri vasina ruzivo uye vasina ruzivo avo vachangobva kutapiswa nemajini.
Kana chinangwa chako chikuru chebhizimisi chekutsvaga chirikukwezva zvakawanda zvinotungamirirwa nehuwandu hwemashamba pamapeji ako ewebhu, zvino unoda kufunga nezvekuvaka backlinks. Muchikamu chino, tichakurukura nzira yekutenga niche backlinks nechinangwa chokukwezva chinotungamirira panzvimbo yako.
Basa rekudzokera shure mune zvebhizimisi kukurudzira
Injini dzinofanana neGoogle dzinoona nzvimbo yako yepaiti uye chiziviso nenhamba uye hutano hwemashure anouya kwauri site kubva kune dzimwe nzvimbo dzewebhu. Iko kunoshamwaridzana kunzvimbo yako kunonziwo inbound kana mukati. Kana webhupu inobatsira ine mazano akawanda kubva kumakwikwi akakwirira eP9 kana mawebhusayithi 10, zvino ichave yakanyanya kunyanya kuWeji peji yemhinduro.
Kana uchiri kunetseka pamusoro pebasa rer backlinks mubhizimusi rako rekutsvaga bhizinesi, rega ndigoverane newe zvimwe zvikakosha zvekubatanidza mabasa ekuvakidzana:
Injini yekutsvakurudza yekusimudza
Kana webhusaiti yako yakabatanidzwa nepamusoro-soro yehutano hwehutachiona hwehutano kana mutevedzeri wepaIndaneti ,Google ichaikuita seyiyo yepamusoro uye ichipa iyo yakakwirira yepamusoro peji yemhinduro.
Kana une sadhi panzvimbo yako, Google inonyora chero zvinyorwa zvitsva zvaunoparidza. Zvisinei, vacheche vachatsvaga nzvimbo yako zvakanyanya kakawanda kana vakawana mamwe backlinks matsva anongotaura. Izvo zvakanyanya kumashure zvaunowana, zviri nani kutamba nzvimbo yako yebazi ichave iyo inobatsira panzvimbo yako yekutsvaga injini yekugadzirisa.
Zvakanaka zvekare shure zvinogona kuunza zvakawanda zvekutumira motokari kumapeji ako epaiti. Uyu mutengesi unogona kuchinjawo nzvimbo yako PageRank uye kusimudza simba rako rechiremera. Uyezve, kutumira motokari kunowanzoshandura kuitengesa.
Unoda kutenga niche backlinks here?
Kutenga backlink inzira inokurumidza kuvawana. Zvisinei, iwe unofanirwa kuva nenzira yakanakisisa yekuita izvi. Iwe unofanirwa kuziva kuti nokutenga zvikwangwani, unoputsa maGoogle webmaster mirayiridzo. Saka, kana iwe usina nzira yakangwara yekutsvaga backlinks, iwe unogona kunge uine zvikwangwani zvakadai se backlinks deindexation, kurasikirwa kwemahofisi, nekudaro.
Sezvo chiito chinoratidza, dambudziko racho rakakwirira kana iwe uchitenga zvikwiriso pamatengo akaderera, sa $ 5 per link. Muzviitiko zvakawanda, iyo yakadhura mari inotaurira pamusoro pehutsika hwehutaneti hunopa iyo iwe. Mhando dzakawanda dzakadaro dze spammy dzakasikwa nechinangwa chimwe chete chekutenga uye kutengesa mazamu akabatanidzwa. Google inogona kuona nyore nyore masayiti akadaro uye inyoresa, uye iwe uchawana mari yekuvadzidzisa Source .